नेपाल पाना प्रकाशित: २०७५-३-९ गते | 3979 पटक हेरिएको
- रामचन्द्र पाैडेल
अर्को कम्युनिष्टहरुले पक्षपातको शासन सुरु गर्दैछन् । यहाँ माक्सवाद, साम्यवाद जनवाद केहि होइन पक्षपातको शासन सुरु हुँदैछ । गाँउ गाँउमा कम्युनिष्टहरु पक्षपातको शासन सुरु गरेका छन् । गाँउ गाँउमा शिक्षकहरु माथि पक्षपात सुरु भएको छ । वजेट विनियोजनमा पक्षपात सुरु भएको । नेपालमा कम्युनिष्ट शासन होइन पक्षपाती शासनको सुरुवात भएको यो पक्षपातको राजको विरुद्धमा कांग्रेसले जेहाद छेड्नु ।
नेपाली कांग्रेसका सामु धेरै चुनौती छन भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छ । यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामीले वारफुटिङमा काम गर्नुपर्छ । यो वारफुटिङ भनेको के हो भने एकै पटक दिमागले १० वटा कुरा सोच्ने ११ वटा निर्णय गरेको काम गर्ने हो । यो स्पिडमा काम गरेर हामील अब कर्मशील कांग्रेस बन्ने बाटोमा सवै लाग्न जरुरी छ । कर्मशील काग्रेस भएर हामीले देशभर जानुपर्‍यो । वडा वडामा टोल टोलमा जनतासंग छलफलमा जानुपर्‍यो । जनतासंग बुझ्न पर्‍यो । जनताका समस्या के के छन भनेर । जनताले कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर हामी अब गाँउ गाँउ टोल टोलमा पुग्न पर्‍यो ।
(नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको मकवानपुरमा सम्पन्न भेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन)
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्यू ! मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाउन किन डराउनुभएको ?
बाबु नेपाली काठमाडौं । बहुदल आइसकेपछि एकाएक सर्वसाधारणको समीपमा रहेर नेकपा मालेका पूर्व महासचिव मदन भण्डारीले भाषण गर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि नेपालमात्र होइन विश्वलाई नै समृद्..